I-Apple Isungula iNqanaba elitsha leZibane zoBumbano ukuxhasa uBulungisa bobuLungisa kunye noBulungisa | Iindaba ze-iPhone
UKarim Hmeidan | | Apple Watch
Enye yezinto ezithi sithanda kakhulu malunga ne-Apple Watch ngamacandelo, ithuba lokunxiba iwotshi entsha yonke imihla, ukubakho kobuntu, yonke into ejikeleze i-Apple Watch. Kukho iifowuni eziqhelekileyo kuzo zonke iiwotshi, ngokukodwa kwiimodeli ezintsha, kwaye zikhethekile kwiimodeli zeNike neHermès. Zonke zisebenza ngokugqibeleleyo, kwaye esi inokuba sisizathu sokuba i-Apple ingazange ivule igalari yemigangatho kubantu besithathu. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha bayasothusa ukusuka eCupertino ngokuqalisa ii-spheres ngaphandle kwesaziso sangaphambili... Ngoku, basanda kuphehlelela izibane ezitsha zoBumbano, inqanaba elitsha lenyathelo loBulungisa bobuhlanga kunye noBulungisa.. Qhubeka ufunda ukuba sikunika zonke iinkcukacha.
Kunyaka nje odlulileyo kunye watchOS 7.3 ifike kwi-Unity sphere kwangesi sizathu sinye senkxaso yoBulungisa kunye noBulungisa bobuhlanga, inqanaba eliye lahamba nomtya wesikhumbuzo. Namhlanje, I-Apple iyasothusa ngokuyila ngokutsha umtya wesikhumbuzo kunye nokucofa, enyanisweni, iye yazisa isaziso kubo bonke abasebenzisi be-Apple Watch ukuba bazame le ngqukuva entsha. "I-analog" yokudayela okokuqala itshintsha uyilo lweklasikhi ummandla weenaliti ubenza basebenze njengeeneon ezibonisa imvelaphi yesphere enemibala yeflegi yasePan-American.. Kakade ke, unako Khuphela ngokuthe ngqo kwigalari yemigangatho yeApple Watch yakho.
I-Apple isandula ukukhupha uhlelo olukhethekileyo lwe-Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop kunye nokudibanisa izibane zewotshi zobuso obuphefumlelwe yi-Afrofuturism, ifilosofi ephonononga amava amnyama ngebali lesayensi, iteknoloji kunye nokuzixhobisa. Njengenxalenye yolu phehlelelo, i-Apple ixhasa imibutho egxile ekukhuthazeni ukubandakanywa kwisayensi kunye nethekhnoloji kuluntu lwemibala ngokusebenzisa i-Racial Equity and Justice Initiative.
Iyilwe ngamalungu kunye namahlakani oluntu olumnyama lwe-Apple lokuyila ukubhiyozela imbali yabantu abantsundu kunye nenkcubeko, i-Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop kunye nokuthelekisa izibane ezihambelanayo zibhiyozela izizukulwana zabantu abamnyama baseMelika kwilizwe laseAfrika. Olu yilo lufuzisela inkolelo yoluntu kwimfuno yehlabathi elilinganayo. Imibala egqamileyo ebomvu neluhlaza yeflegi yePan-African ibonakala njengezibane ezidaphukhaphu kwibhanti emnyama.
Umtya weSolo Loop Black Unity uyamangalisa… Ibhanti iphefumlelwe yi-afrofuturism kwaye oko kufanekisela imfuneko yehlabathi enobulungisa. Yenziwe ngepolyester ehlaziyiweyo (enefilaments ezingaphezu kwe-16000), ine- mnyama ngombala oluhlaza nabomvu. Ifanelekile ukudibanisa kunye ne-Unity Lights sphere. Ixabisa kwi-9Ii-euro ezi-9 kwaye sele unayo kwiVenkile ye-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple isungula iNqanaba elitsha leZibane zoBumbano ukuxhasa uBulungisa bobuLungisa kunye noBulungisa